Ade nyinaa yɛ ahuhude! (1-11)
Asaase wɔ hɔ daa (4)
Owia, mframa, nsubɔnten; ne nyinaa di akɔneaba (5-7)
Ade foforo biara nni wiase (9)
Nnipa nyansa nnu baabiara (12-18)
1 Dawid ba, ɔsɛnkafo*+ a odii hene wɔ Yerusalem no,+ ne nsɛm ni. 2 “Ahuhude mu ahuhude!”* Ɔsɛnkafo no na waka,“Ahuhude mu ahuhude! Ade nyinaa yɛ ahuhude!”+ 3 Dɛn na onipa nya fi n’adwumaden nyinaa mu,Adwuma a obiri ne mogya ani yɛ wɔ wiase nyinaa no?+ 4 Awo ntoatoaso kɔ, na awo ntoatoaso ba,Na asaase de, ɛwɔ hɔ* daa.+ 5 Owia pue,* na owia kɔtɔ;Afei ɛde mmirika san kɔ baabi a epue fii no, na ɛsan pue bio.+ 6 Mframa kɔ anaafo, na etwa ne ho kɔ atifi;Etwa ne ho frɛdɛfrɛdɛ; mframa kɔ so ara twa ne ho. 7 Nsubɔnten* nyinaa tene kogu po mu, nanso ɛpo nyɛ ma da.+ Baabi a nsubɔnten no fi ba no, ɛhɔ ara na ɛsan kɔ, na asan afi hɔ aba bio.+ 8 Ade nyinaa yɛ ɔbrɛ nko ara;Obiara ntumi nka ho asɛm mpo. Ani hwɛ ade a, ɛmmee,Na aso nso tie asɛm a, ɛnyɛ ma. 9 Nea aba pɛn no, ɛno ara na ɛbɛsan aba,Na nea wɔayɛ pɛn no, ɛno ara na wɔbɛsan ayɛ bio;Ade foforo biara nni wiase.+ 10 Ɛdɛn paa na ɛwɔ hɔ a obi betumi aka sɛ, “Hwɛ, ade yi yɛ ade foforo”? Ɛwɔ hɔ fi teteete;Ɛwɔ hɔ dedaadaw ansa na yɛreba. 11 Obiara nkae tetefo;Na nkyirimma nso, obiara renkae wɔn,Wɔn a wobedi wɔn akyi aba nso renkae wɔn.+ 12 Me ɔsɛnkafo no, midii Israel so hene wɔ Yerusalem.+ 13 Mede sii m’ani so sɛ biribiara a wɔyɛ wɔ ɔsoro ase,+ kyerɛ sɛ, adwumahunu a Onyankopɔn de ama nnipa a egye wɔn adwene no, mede nyansa+ besua ho ade na mahwehwɛ mu. 14 Na mihuu nnwuma a wɔyɛ wɔ wiase nyinaa,Na hwɛ! ade nyinaa yɛ ahuhude, na ɛyɛ ɔbrɛgu.*+ 15 Nea akyea no, wɔrentumi nteɛ no,Na nea enni hɔ nso, wɔrentumi nkan mma ɛnyɛ yiye. 16 Ɛnna mekae wɔ me komam sɛ: “Hwɛ! Mahu nyansa pii asen wɔn a wodii me kan wɔ Yerusalem nyinaa,+ na me koma anya nyansa ne nimdeɛ pii.”+ 17 Mede me koma hwehwɛɛ nyansa ne adammɔ* ne nkwaseasɛm.+ Na eyi nso yɛ ahuhude, na ɛyɛ ɔbrɛgu.* 18 Efisɛ nyansa bebrebe de ahometew bebree na ɛba. Ɛno nti, obiara a ɔma ne nimdeɛ dɔɔso no, ɔma ne yaw nso dɔɔso.+
^ Nt., “ɔnoboaboafo.” Anaa “nea ɔboaboa asafo ano.”
^ Anaa “Ade a mfaso biara nni so.”
^ Nt., “egyina hɔ.”
^ Anaa “hyerɛn.”
^ Anaa “Awɔw bere mu nsubɔnten.”
^ Anaa “nkwaseasɛm a ɛboro so.”